PDF တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟူသမျှ NLD/CRPH/NUG တာဝန်ခံမှု ရှိပါ့ မလား ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း PDF တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟူသမျှ NLD/CRPH/NUG တာဝန်ခံမှု ရှိပါ့ မလား ?
❖ စစ်ကောင်စီဒေါက်တိုင်တွေကို ဖောက်ခွဲ ချေမှုန်းဖို့ဆိုပြီး ဟိုဟိုဒီဒီမှာ ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ဟူသမျှ NLD/CRPH/NUG တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ရှိပါ့ မလား ?
❖ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရှု့ဒေါင့်က ဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်တွေ ရှိနေလဲ ဆိုတာ #ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် #Legal Aid Network #LAN ရဲ့ တည်ထောင်သူနှင့် #ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီ ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သူ #ဆရာဦးအောင်ထူးကို #MCNTVNEWS ရဲ့ #အယ်ဒီတာ ကျွန်တော် #အံ့ဘုန်းမြတ် (ည ၉:၀၀) နာရီအချိန်မှာ (Live) မေးမြန်းတင်ဆက်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
● Direct Contributions can be made by membership in Youtube Channel.
● Youtube တွင် တစ်လ ၁ ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် စတင်ကာ Channel Membership ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် “ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု” ကို MCN TV NEWS နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြပါစို့.. (Link အားနှိပ်ပါ) https://bit.ly/3fBmQe5
● [အထူးသတိပေးချက်] MCN TV NEWS ၏ ရုပ်/သံအစီအစဉ်များအား ခိုးယူလျှက် ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်နေသည့် လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သတင်းမီဒီယာဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ “ဂျင်းသူခိုး” Youtube Channel များအား အားမပေးခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုအား မြှင့်တင်ပါ။
#Please #Subscribe #Our #Channel #For #More ##Update
#မြန်မာ #သတင်း #သုံးသပ်ချက် #အင်တာဗျူး #ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း #ရုပ်သံအစီအစဉ် #Myanmar #Channel #News #မြန်မာ #ရုပ်/သံ #သတင်းဌာန
Previous articleသွေးကြွေးတွေ ဆွေးနွေးဖို့ မဖြစ်ရေးနှင့်၊ တော်လှန်ရေးအဓွန့်ရှည် ဆုံးဆုံး မမြှုပ်ရေး [HD]
Next articleUEC အစည်းအဝေး တက်ရေး/မတက်ရေးနှင့် ပါတီစုံစနစ် လမ်းဆုံး @ ဦးအောင်ထူး [19 MAY 2021] [HD]